My Life asaDoctor ဆရာဝန်ဘဝ စာမျက်နှာ: September 2014
Posted by Dr. Tint Swe at 11:39 AM 1 comments
2.	အကျအနလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ အဲဒီ MCN TV News မှာဘဲ တခုထပ်တွေ့ပြန်ပါတယ်။ “အမြင့်ပေ မီတာ ၄၀၀၀ ရှိတဲ့ မီးရထားလမ်း Bolivia မှာဖွင့်လှစ်” တဲ့။ ပေ နဲ့ မီတာ အတူတွဲမသုံးသင့်ပါ။ မီးရထားလမ်းဆိုတာ အလျားလိုက် အရှည်ဖြစ်တယ်။ အမြင့်မဟုတ်ပါ။ မီတာ ၄ဝဝဝ ရှည်တဲ့ မီးရထားလမ်းလို့သာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ မြင့်တဲ့နေရာမှာတည်ဆောက်ထားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
3.	၁-၅-၂ဝ၁၄ နေ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဆေးခန်း-ဆေးရုံတခုက အပြာရောင် ဆိုင်းဘုတ်လေးတခု တွေ့လာတယ်။ 'အာထွာရာစောင်းစခန်း' တဲ့။ ('အာလ်ထွာဆောင်း' လို့ဖြစ်သင့်တာပါ။ ‘အာထွာဆောင်း’ ဆိုလဲ ရပါတယ်။)
4.	၃-၅-၂ဝ၁၄ နေ့မှာ မော်ဒယ် မိန်းကလေးတယောက် ရင်ပတ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိပြီး ပါးစပ်လေးဟနေတဲ့ ပုံအောက်မှာ ‘ရှင်ထဲကို ထိသွားတာဘဲ ဟယ်’ ဆိုပြီးရေးထာ တွေ့ရပြန်တယ်။ (ရင်ထဲလို့ ရေးရပါမယ်။)
ဇာတ်ကြော်ကအမြဲတမ်းနာနေတယ် = ဇက်ကြောကအမြဲတမ်းနာနေတယ်
• အစိုးရ သတ်ပုံတော့ ပြောမနေနဲ့ http://my-sayawun-life.blogspot.in/2012/12/blog-post.html
Posted by Dr. Tint Swe at 11:21 AM0comments
စစ်အစိုးရတွေ စလေကတည်းက လူတွေကိုသတ်ခဲ့တာကို ပြောနေကြတာ ကြာပါပကော။ နောက်သတ်ပုံတခုကို ပြောပါရစေ။
ခေါင်မိုးဖျက်ခဲ့တာက ဦးနေဝင်းအစိုးရဖြစ်တယ်။ ‘မဆလ’ လက်ထက်ကစပြီး မြန်မာစာသတ်ပုံတွေ အာဏာနဲ့ ပြင်စေခဲ့တယ်။ (တ) ဖြစ်ရမှာတွေကို (တစ်) ‘စသတ်’ တွေထည့်စေခဲ့တယ်။ မြန်မာအဘိဓာန်၊ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်၊ မြန်မာစာသတ်ပုံကျမ်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်သမျှလဲ ‘တစ်’ တွေချည်းဘဲ။ အစိုးရသတင်းစာ၊ ဘယ်သူက ပုံနှိပ်တာဖြစ်ဖြစ် ‘တစ်’။ အရင်ကထုတ်ခဲ့၊ ရေးခဲ့တာတွေကို ပြန်ထုတ်လဲ မူရင်းသတ်ပုံတွေကို ပြင်ပေးမှ ထုတ်ရတယ်။
ဗန်းမော်တင်အောင်ဝတ္ထုက ‘ဘုန်းမောင်တစ်ယောက်ထဲရယ်’ ဖြစ်မှ ရတော့တယ်။ မင်းဆွေ ရဲ့ ‘ဒါး’ က ‘ဓါး’ ဖြစ်သွားတယ်။ စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း ‘ငမဲ’ က ‘ငမည်း’ ဖြစ်လာပြီး၊ မြတ်ထန် ရဲ့ ‘နှောင်းတမြေ့မြေ့’ က ‘နှောင်းတမြည့်မြည့်’ ဖြစ်လာရတယ်။ လင်းယုန်သစ်လွင် ချွေးတပ်စခန်းထဲက ‘ယိုးဒယား’ က ‘ထိုင်း’ ဖြစ်လာရသေးတယ်။ စွယ်စုံကျမ်းမှာ ‘ထိုင်းလင်းနိုင်ငံ’ လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး၊ မြန်မာတို့က ယိုးဒယားနိုင်ငံလို့ခေါ်ကြောင်း ရေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ် အတိုကောက် ‘ထိုင်း’ လို့ လူသုံးများလာတယ်။ ဒိနောက်မှာ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ‘ယိုးဒယား’ လို့သာ ခေါ်ကိုခေါ်ရမယ်၊ ရေးမယ်လို့ ပြင်ပြီးသတ်မှတ်လာခဲ့တာ သိပ်ကြီး မကြာလှသေးပါ။ အမှန်မို့ ပြန်ပြင်တာမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီအရ ဖြစ်ပါမယ်။ ‘ထိုင်းအဲယားဝေး’ ကို ‘ယိုးဒယားအဲယားဝေး’ အလုပ်မခိုင်းတာ တော်သေးရဲ့။
ကျန်းမာရေးမေးခွန်တွေမှာတော့ ကလေးတွေမဟုတ်၊ လူကြီးတွေက မှားရေးနေကြတာပါ။ အသက်၊ ကျား-မ လဲပါလို့ သိရတာပါ။ ၁-၅-၂ဝ၁၄ နေ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဆေးခန်း-ဆေးရုံတခုက အပြာရောင် ဆိုင်းဘုတ်လေးတခု တွေ့လာတယ်။ 'အာထွာရာစောင်းစခန်း' တဲ့။ 'အာလ်ထွာဆောင်း' လို့ဖြစ်သင့်တာပါ။ 'အာထွာဆောင်း' ဆိုလဲရတာပါ။ ၃-၅-၂ဝ၁၄ နေ့မှာ မော်ဒယ်မိန်းကလေးတယောက် ရင်ပတ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိပြီး ပါးစပ်လေးဟနေတဲ့ပုံအောက်မှာ ‘ရှင်ထဲကို ထိသွားတာဘဲ ဟယ်’ ဆိုပြီးရေးထာ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁ဝ၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြန်မာသစ် ရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ ၉၉ မှာ သာရဝေါစိုးကြည်ရေးသားတဲ့ အမျိုးသားပညာဝန်ဦးဖိုးကျားဆောင်းပါးမှာ ကျောင်းနာမည်ဟာ ‘တိုင်တစ်ရာ’ ဖြစ်သွားရတော့တယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းဟာ စာပေတန်ဘိုးအတွက် အားထားရတဲ့ အတန်းအစား ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ခေတ်က ထုတ်ဝေတာဖြစ်လို့ နေမှာပါ။
‘မြန်မာ့ပညာရေး မြင့်မားလာစေရန်အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူကို ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းနာမည်ကို ပြောင်းခဲ့ကတည်းက အမျိုးသားပညာရေးဟာ ကျဆင်းဆုတ်ယုတ်လာတာ ဖြစ်တယ်။’ ပြန်ပြင်၊ ပြန်တင်ကြဘို့ အချိန်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် မှားရေး၊ လွဲရိုက်နေတာတွေကိုလဲ ပြင်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။